Google ‘oo ka aargoosanaya shaqaale ka cabanayay takoor loo geysto haweenka’ | Biyoguurenews.com
Home Wararka Google ‘oo ka aargoosanaya shaqaale ka cabanayay takoor loo geysto haweenka’
Google ‘oo ka aargoosanaya shaqaale ka cabanayay takoor loo geysto haweenka’
Qabanqaabiyeyaashii shaqo-joojinno taxane ahaa oo looga cabanayay sida ay shirkadda Google ula dhaqanto haweenka ayaa sheegay inay shirkaddu siyaabo kala duwan uga aargoosanayso.
Bishii November, ilaa 20,000 oo shaqaale ah ayaa xafiisyada Google ee ay ka shaqeynayeen isaga tegay iyagoo dalbanaya in isbeddello dhowr ah lagu sameeyo sida ay shirkaddu wax uga qabato eedeymaha la xiriira tacaddiyada jinsiga.
Labo ka tirsan shaqaalihii ka dambeeyay dibadbaxyada, ayaa ku eedeeyay Google inay ka aargoosatay dhowr ka tirsan qabanqaabiyeyaasha.
Google ayaase dafiray arrintaas.
Claire Stapleton, oo u doodda xuquuqda shaqaalaha ayaa sheegtay in laga qaaday xilka madaxa suuq-geynta kaddib dibadbaxyada.
“Ninka madaxa ii ahaa wuxuu bilaabay inuu i inkiro, shaqadeyda dad kale ayaa la siiyay, waxaana la ii sheegay inaan qaato fasax caafimaad, aniga oo aan xanuunsaneyn,” ayay ku tiri email cabasho ah oo ay dirtay.
Gabadhan ayaa sheegtay inay qabsatay qareen u dooda, kaddibna ay u suurto-gashay in shaqadeedii loo soo celiyo, balse weli aanan loola dhaqmin si wanaagsan.
Meredith Whittaker, oo wax ka saxiixday email-ka, ayaa sheegtay in booskeedii shaqo laga beddelay.
Email-ka ay shaqaalahan qoreen ayay ku sheegeen: “Sheekooyinkeenna keliya maaha. Google wuxuu caado u leeyahay aargoosiga, taas oo lagu aamusiinayo haweenka, dadka madow, iyo kuwa laga tirada badan yahay.
“Haddii aan dooneyno inaan joojinno takoorka, tacaddiga iyo go`aan-qaadashada aan habbooneyn, waa inaan joojinnaa inaan ka aargoosanno dadka sida furan uga hadla dhibaatooyinkaas.”
Previous articleBBC Maleeshiyo Maraykanka gudihiisa ugu “tababaranaya khaarajinta Obama”
Next articleDAAWO;-Prof Samater Oo Ku Baaqay In La Kala Diro Komishanka, Soona Bandhigay Tirada Loo Baahan Yahay In Ay Noqdaan